Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka : “Ny marina no haha olona afaka anareo” ( Jn 8, 32) » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
« Fangatahan’ny Papa ao amin’ny TPPM Novambra 2017
Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny volana desambra 2017 »
Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka : “Ny marina no haha olona afaka anareo” ( Jn 8, 32)
Aiza ho aiza re ny halalin’ny finoantsika kristiana ankehitriny? Tsy miha marefo ve tratry ny fitsapana goavana miseho andavanandro? Ny mahagaga dia efa nifanaraka tsara amin’ny voalazan’ny Papa Fransoa ny finoan’i Botovasoa : “ Ny tena finoana ny Zanak’ Andriamanitra tonga nofo dia tsy afa-misaraka amin’ny fahafoizan-tena, amin’ny firotsahana ho isan’ny ankohonan’ny mpino, amin’ny asa fanompoana, ary amin’ny famitranam-pihavanana amin’ny maha nofo aman-drà ny hafa. Ny Zanak’ Andriamanitra tonga nofo no mitaona antsika hanova fenitra eo amin’ny fomba fanehoam-pitiavana.” (Hafalian’ny Evanjely n° 88)
Raim-pianakaviana nanolo-tena tanteraka ho an’ny vady aman-janany. Tsy maintsy mody ao an-trano izy isan’andro isan’andro na lavitra aza ny “tournée” ataony. Eo am-pisakafoana dia izy no manome aina ny dinidinika hahazoana hafaliana. Ho fiombonany amin’ny fijalian’i Kristy, mifady hanina izy isaky ny alarobia sy zoma, hany ka, amin’ireo andro ireo, matetika izy no mizara amin’ireo zanany izay anjara sakafo tokony hohaniny.
Mikorosy fahana tanteraka ny fiainantsika Malagasy ankehitriny. Mbola mahazo tatitra maro mampihoronkoditra izahay : noho ny fikorontanan’ny toe-tany sy ny toetrandro, noho ny hai-tany mafibe, noho ny fitiavan-tena sy ny politikan’ny samy maka ho azy dia mbola mahazo vahana be dia be ny fahantrana. Ny tsy fandriampahalemana efa mampandry tsy lavoloha ny maro ka mampitombo ny tebiteby marain-tsy hariva. Ny fifandraisan’ny samy mpiara-belona feno tsy fifampitokisana. Mihanaka any amin’ny seha-piainana manontolo ny kolikoly ary ny vidim-piainana tsy mitsaha mitombo.Tena mahazo toerana faratampony ny fitiavan-tena sy ny fanompoana ny VOLA. Vokatr’izany, tsy misy hasiny ny aina fa tahaka ny mamono akoho ny mamono olona. Maty ny MARINA eto Madagasikara
RP Jean Claude RAKOTOARISOA, Administrateur diocésain’i Tsiroanomandidy
Tags: Hafatry ny Eveka, Lucien BOTOVASOA